Tamsaasa kallattiin 'International Space Station-ISS' irraa dabruun ardii daawwatuun danda'ame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Tamsaasa kallattiin ‘International Space Station-ISS’ irraa dabruun ardii daawwatuun danda’ame
Waan gubaa, gara samii keessa oljiru beekuun hawwii fi aabjuu hedduun keenna xiqqeennaa kaasee hawwine, woliin guddanne. Gamoo hedduu dheeraa ta’e irra bahanii namoota lafa irra yaa’an, manaa fi gaarreen fageennatti ilaaluunuu miira keenna irratti maal akka uumu hedduun argitan ta’a. Samii keessa hedduu olbahani gadilaaluun hoo hangam nama gammachiisa, ajaa’ibsiisa laata?
Hanga ammaatti namoota 543 qofa kanneen samii keessaa ol-lixanii, km 428 ykn ji’a irraa, gara laafaatti ija isaaniitiin ardiin uumama addaddaa baadhattu maal akka fakkaattu ilaaluu kan danda’an. Galanni NASAf haata’u, hundi keenna, jechuun kanneen kompiyuutaraa fi intarneeta qaban marti tamsaasa qajeelatti Buufata Qorannoo Samii Idil-addunyaa ‘International Space Station-ISS’ irraa dabru hordofuu, duukaa bu’uu danda’u. Tamsaasni kuni kaameraa wontoota lafa irra jiran kanniin xiqqeenni isaanii meetira 5 hanga 1 jiddutti argaman hunda agarsiisa. Tamsaasa dabru kana yoo ilaallu akka waan samii gubbaa gara lafaatti gadi iaalluutti kan waacufti mul’atu. Samii gubbaa akka jirtanitti uf-fudhadhaa.
Tamsaasni kallattii inni yaalii jalqabaa kan eegale Ebla 2014 keessa. Erga sanii kaasee, anaan wolitti, namoota miliyoona 30 ol kan ardii teenna samii irraa gadi ilaalan.
Tamsaasni kuni kaameraa gara lafaatti aggaamaman hedduu qaba. Irra jireessatti kaameraa lama kan waan lafa irratti arge hunda kan tamsaasutti jiru. Kaameroonni kunniin wolgegeeddaraa hojjatu. Yeroo isaan wolgegeeddaran tamsaasni yeroodhaaf addaan cita. Egaa san obsuman eegutu mala.
Namoota hedduuf kuni raajiidha. Eddoo saasinsiin gahe kan qajeelatti mul’isu. Beekumsa ilma namaa akka dinqisiifattan, waan arguf deemtanittis akka gammaddan abdii qaba.
Tamsaasa kallattiif as bira tuqaa.
buufata samii idil adunyaa
Previous articleMurteen salgeen seeraa ajjeechaa Maaykil Braawun irratti kenne jeequmsa guddaa Ameerikaa keessatti uume
Next articleTaphootaa Liigii Shaampiyoonaa Awrooppaa geggeeffameen Arsenaal, Cheelsii, Baarseloonaa, Riyaal Maadriid fi Siitiin injifatan. Li’oneel Messiin ammas abbaa rikoordii haarawaati